Maqaalka soo socda ayaa markii hore daabacay Keecha Harris iyo Associates, Inc., Agoosto 18, 2019. Waxaa halkan dib loogu daabacay iyadoo leh rukhsad buuxda. The Taxanaha Sinaanta Runta Sinaanta waa aruurinta sheekooyinka, waxaa xaliyay Keecha Harris iyo Associates, Inc., xuddun u ah safarradii sinnaanta ee InDEEP kaqeybgalayaasha barnaamijka iyo kuwa kale ee saameeya arrimaha samafalka.
Mark Muller, maamulaha barnaamijka wabiga Mississippi McKnight Foundation, wuxuu had iyo jeer rumeysan yahay 'Quduuska nolosha oo dhan.' Laakiin si ka badan, wuu ogyahay in habka 'nolosha oo dhan' loola dhaqmo uusan la mid ahayn, uuna leeyahay rabitaan ah inuu wax ka qabto taas.
"Waxaan u maleynayaa in safarkayga sinnaanta jinsiyadeed markii hore lagu saleeyay aragti ku saleysan caqiido," ayuu yidhi. "Taasi waxay kicisay biqilka taas oo noqotay mid aan u jeclahay arrimaha sinnaanta. Qaybta labaad waxay ahayd khibrad nololeed iyo inaan aragno sida farqiga u dhexeeyo dhinacyo badan oo bulshada ah. ”
Khibraddiisa gaarka ah iyo tababbarka gaarka ah ee xoogga saaraya sida iskudarka, Kala duwanaanta, iyo Sinnaanta deegaanka 'Falanqaynta Deegaanka' InDEEP), Muller wuxuu gartay ma ahan oo keliya cunsuriyadda dhisme ee ka jira bulshada Mareykanka, laakiin wuxuu sidoo kale aflagaadeeyay miyir-beelkiisa.
Hadda wuxuu rumeysan yahay inay qayb ka tahay shaqadiisa inuu wax uun ka qabto waxyaabahaas.
Sidee beel midabku u lenskalaa u tarmaysaa uguna kortaa
Mid ka mid ah waxyaabaha udub dhexaadka u ah cunsuriyadda iyo sinaanta Muller wuxuu la jaan qaaday waa mudnaantiisa sida nin cad - awooda iyo raad ku lahaanshaha uu adeegsanayo, gaar ahaan go'aamiyaha urur samafal ah.
"Dadka cadaanka ah ee aniga oo kale ah badiyaa ma aqoonsana in aan ku dhex milno dhaqan cadaan ah, mana arki karno biyaha aan ku dabaalano," ayuu yidhi. Waxaan si qalad ah u qaadan karnaa in dariiq gaar ah oo wax lagu qabto ay tahay wadada kaliya ee saxda ah, iyo dhaqankayga cadaanka ah, iskuulka, iyo khibradeyda shaqo waxay sii xoojinayaan inay jirto hal dariiqo oo sax ah.
Muller wuxuu yiri madaama uu la shaqeeyey dad badan oo madow, bunni ah iyo dadka asaliga ah, wuxuu gartay in qawaaniinta lagu soo rogay dhaqanka caddaanku aysan had iyo jeer la jaan qaadi karin baahiyaha dadka ku nool bulshooyinka aan haysanin.
Waxaan ogaaday in ay jiraan habab badan oo lagu gaaro hal yool. Waxaan si wada jir ah u lumi doonnaa hanti hal abuur leh iyo xariifnimo haddii qof walba lagu qasbo inuu qaato ku dhaqanka hal dhaqan oo caan ah. Dhamaanteen waxaan leenahay masuuliyadeena in aan iska ilaalino fikirka ah 'sidan ayaa ah inaan wax ku qabanno halkaan', laakiin inaan baarno oo aan dhiirrigelino qaabab kala duwan iyo dhaqammo kaladuwan, "ayuu yidhi.
Muller wuxuu carrabka ku adkeeyay in qibradiisa nololeed - oo ah la-shaqeynta iyo la shaqeynta dadka ka duwan isaga - ay ka caawisay inuu gaaro xaqiijinta oo uu noqdo mid aad u badan oo aqbala kala duwanaanshaha.
Talaabooyinkan ayaa sidoo kale isbedel ku sameynaya shaqadiisa. Tusaale ahaan, Muller iyo Ururka 'McKnight Foundation' oo dhan waxay tixgelin dheeraad ah siinayaan hoggaanka abaabulka ee deeq-bixinta.
"Ma lihin sharci adag oo deg deg ah oo ku saabsan tirada ururada uu hoggaamiyo dadka midabka leh ee booskeena, laakiin hadda waxaan uruurinaynaa xogta waxaanna tixgelinaynaa istiraatiijiyado lagu dhiirigelinayo kala-duwanaanta hoggaanka," ayuu yidhi.
Muller wuxuu sidoo kale sheegay inuu bilaabay inuu aqoonsado oo wax ka qabto aflagaadada miyir la’aanta ah ee ku habsatay gaar ahaan howlaha barnaamijka barnaamijka Wabiga Mississippi.
Mark Muller, Maamulaha Barnaamijka Wabiga Mississippi
"Waxaa jira kala duwanaansho ballaaran oo dad ah oo ku nool hareeraha wabiga Mississippi, laakiin waxaan u dhaqaaqnay inaan qaadno caqabadaha ugu xiisaha badan deegaannada abaabulan sida bulshada kalluumeysiga kalluumeysiga ama xayawaannada shimbiraha ka shaqeeya, ururradanina waxay u muuqdaan inay kuwa hodan ka yihiin. oo xiiray, ”Muller ayaa yidhi. “Taasi waxay timid iyada oo laga duulayo ururrada caddaaladda deegaanka ee aan si wanaagsan loo maalgelin oo aan si wanaagsan ugu matalin geedi socodka samaynta siyaasadaha.
"Waxaan si firfircoon isugu dayeynaa in aan sifiican u fahamno muhiimadaha ururadaas, aan maalgelinno kuwa badan, iyo in aan dhisno buundo dheeri ah oo udhaxeeya caddaaladda deegaanka iyo ururada deegaanka ee guud."
Guud ahaan, Hay'ada 'McKnight Foundation' waxay ka weecaneysaa dariiqyada midab-kala-sooca iyo u dhaqaaqista isbeddelo ku habboon dhinac kasta oo ka mid ah shaqadeeda - laga bilaabo deeq-lacageedka ilaa geedi socodka gudaha sida shaqaaleysiinta iibiyaasha iyo soo iibsiga.
“Mid ka mid ah waxyaabihii uu McKnight si wanaagsan u qabtay waa horumarinta fursadaha dhammaan shaqaalaha oo dhan si ay uga qaybqaataan horumarinta sinnaanta,” ayuu yiri Muller. Tusaale ahaan, dhowr shaqaale ah oo aan ku lug lahayn deeqda bixinta ayaa waxay diirada saaraan dhaqanka wax soo iibsiga. McKnight waxay tan iyo markaas horumarisay borotokoolyo kala duwan oo iibiyaasha cuntada maxalliga ah oo mudnaanta siiya ganacsiyada ay leeyihiin dadka midabka iyo dumarku leeyihiin. ”
Soosaarista iyo dhisidda xiriir kaladuwan ayaa fure u ah hawshan. Wuxuu sameeyay dadaalo muuqda si uu u balaariyo kooxda dadka uu la dhisayo cilaaqaadkaas.
"Hal dariiqo oo aan qaaday waa in aan qaato shirar badan, mararka qaarna aan yeesho inta badan kulammada toddobaadlaha ah, ee aan la yeesho dadka midabka leh," ayuu yidhi Muller. "Waa inaan sameeyaa go'aan deg deg ah oo looga baxo askartii hore ee ilaaliyeyaashii deegaanka."
Qayb aad ugu baahan baahi isbedel
Muller wuxuu yidhi waaxda deegaanka guud ahaanba waa inay u dhaqaaqdaa dhanka cadaalada iyo waxqabadka loo wada dhan yahay hadii ay rabto inay sii wado mustaqbalka.
"Haddii aan wax laga beddelin, oo sida xubinnimada carruurta ee ururradan ay sii ahaato da'da, ururradan waxay la kulmayaan halista inay noqdaan kuwa aan qusaynin." Ayuu yidhi Muller. "Waaxda deegaanka gabi ahaanba waxay ubaahantahay inay si fiican u fahanto kala duwanaanshaha, sinnaanta, iyo ka mid noqoshada, maahan kaliya inay tahay waxa saxda ah in la sameeyo, laakiin iyada lafteedu ah sii wadista iyo helitaanka cod xoogan mustaqbalka."
Kala caddeynta kala duwanaanshaha deeq-bixiyeyaasha ayaa ah tallaabada ugu horreysa ee wanaagsan, ayuu yiri Muller, laakiin waaxdu waa inay horay u sii socotaa; waxay u baahan tahay inay tixgeliso in ahmiyadaha hay'addu inta badan lagu soo saaro iyada oo la adeegsanayo muraayadaha dhaqanka xoogga cad. U doodayaasha caddaaladda deegaanka, dhinaca kale, waxay had iyo goor u fiirsadaan arrimaha ka badan muraayadaha caddaaladda marka loo eego lenska deegaanka.
Halkaas ayuu Muller u arkaa tababar iyo dadaallo horumarineed sida InDEEP oo door ka ciyaaraya. Wuxuu sheegay inuu si gaar ah u qiimeeyay InDEEP 'Isku xidhka Sinnaanta Bulshada ee Dhaqanka (EECoP).
Waxaan u arkaa qiimo noocan oo kale ah in la helo koox dad ah oo wadaaga khibradaheena iyo sida ay nooga go'an tahay xallinta arrimahan. Waan ku faraxsanahay inaan kulligeen wada joogno. ”
Khibraddiisa gaarka ah iyo tababarkiisa, Muller wuxuu soo maray awooda uu leeyahay iyo masuuliyadiisa inuu u adeegsado hormarinta sinaanta.
"Waxaan aqoonsanahay inaan si qaali ah ii sharaf u leeyahay inaan ku raaxeysto jago ay hoggaamiyeyaasha aan faa'iido doonka ahayn dhageystaan waxaan dhahayo. Waxaan rabaa inaan ka faa'ideysto mowqifkaan dhanka samafalka si aan ugu hormariyo sinaanta dhaqdhaqaaqa deegaanka. Waxaan isku dayaa inaan tan sameeyo markasta oo aan awoodo, iyo shaqada INDEEP ayaa iga caawisay inaan taas wax ku ool u noqdo. ”
Mawduuca: Sinnaanta Caadi ahaaneed iyo Ka Qayb-qaadashada, Webiga Mississippi